Kuyaziwa ukuthi ethiyetha iqala isiphanyeko, kodwa endlini eyaziwa - ne iminyango. Isicabha kwenza kube nokwenzeka ukuba zibeke phansi abanye umxhwele kwabakhileyo kuyo. Ngokuqondene iminyango ingaphakathi, ngokuvamile alucezu ezinhle ifenisha ehilelekile nomklamo walo, kanye nempahla yasendlini. Iminyango wenza iziphi izinto akugcini nje wenza - kulezizinsuku aziwa inani elikhulu ukusetshenziswa esiwusizo sokuba nezinto eziqondile izinto yokufakelwa. Nokho, ukhuni yemvelo namanje hhayi kuphela efanele, kodwa futhi ethandwa.
amalungu afanayo Ngokhuni ubukeka eyisidlakela zikanokusho, ngakho-ke ngenkuthalo esetshenziswa ukwenziwa iminyango, libhekene ezahlukene design izici. Ngokuvamile, okhunini oluqinile manje uqonde hhayi nje kuphela ucezu esiqinile izinkuni, kodwa futhi impahla edalwe usebenzisa kunenze nisondelane amaningi, izacile, amabhodi. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukudala webs ukuthi zisho amelana ukusonteka izinguquko nomswakama. Ngakho, amalungu afanayo laminated ka ngaphezulu zobuchwepheshe kanye nama-practical, kuba ngokuphelele ngqo.
Iminyango eyenziwe afanayo laminated ngokuhamba kwesikhathi musa crack noma eyoboya bezimbuzi, ukuthi nakanjani kwenzekani imikhiqizo ezenziwe ngokhuni abavamile. Plus kunjalo futhi eqinisweni lokuthi ishibhile! Iminyango ezenziwe ngokhuni yemvelo, akafinyeleli ngombala owodwa, ezingaphezu kuka-ingxenye umkhiqizo ofanayo ezihlukile. Lokhu kubanika ikhubalo ekhethekile kanye wedwa. Ngokwesibonelo, i-oki iminyango ungaba shades yokukhanya ephuzi ukuze iba nsundu ngokubomvu (kuye ngokuthi engu-isihlahla).
Oak ukhuni kunzima ngempela ukusingatha, kodwa kuwo etholwe umkhiqizo enamandla kakhulu futhi isikhathi eside. Kodwa cherry noma umlotha usengozini, ngakho ukucubungula kube lula. Kusukela engabizi zikaphayini iminyango Futhi enziwa ngoba izinkuni lesi sihlahla kahle kusetshenzwe futhi kwenza imikhiqizo ephezulu. Ezweni lethu ethandwa kakhulu iminyango Belarusian ekhiqizwa kulokhu kwaziswa. ukukhiqizwa yabo iya Pines ezikhulayo eduze abadumile Bialowieza Ihlathi. imikhiqizo ezinjalo uhlobo ezintweni Labo abasiqaphelayo ngezinto zemvelo, kodwa hhayi ukulikhokhela semali kakhulu oki iminyango, isibonelo. Iminyango tingentiwa zikaphayini izimpumputhe (yinye) noma ifaka of ingilazi emasayizi nabobunjwa labehlukene.
Umklamo umnyango "Lokudabuka Belarusian" Framework izihlangu. Ngezinye ukukhiqizwa yabo kuphela uhamba omisiwe kahle zikaphayini izinkuni, ogama degree umswakama lobu-8 kuya ku-10%. Ukudweba phezu emnyango sisetshenziswa esebenzisa Milling futhi ugcizelela kahle ubuhle bemvelo izinkuni. Kufanele kuqashelwe ukuthi iminyango Belarusian ukuwugcina ngokuphelele, okuyinto izivakashi Russian.
Indlela ukukhetha iminyango ingaphakathi
Lokulala Wezingane enkulisa: design imibono
Kuyini Neko? Maneki-Neko - isikhumbuzo ewusizo